Sheekh Nuur Baaruud oo geeriyooday & Madaxda dowladda oo ka hadlay - Awdinle Online
Sheekh Nuur Baaruud oo geeriyooday & Madaxda dowladda oo ka hadlay
Alle ha u naxariistee waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ku geeriyooday Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliyeed.
Marxuum Sheekh Nuur Baaruud ayaa maalmihii la soo dhaafay kula xanuunsanayay Cudurka Coronavirus Isbitaalka Martiini ee Magaalada Muqdisho oo uu muddo Saddex Cisho ah kujiray, iyada oo ugu dambeyn uu xalay geeriyooday.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geerida Alle ha u naxariistee Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa Qoyska iyo Ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistee Caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ahaa Guddoomiyaha & Afhayeenka Hay’adda Culimada Soomaaliyeed, waxaana dhowr jeer uu ka badbaaday weeraro ay Xubno ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen qaar kamid ah Hoteelada ku yaal Magaalada Muqdisho.
Previous articleGuddiyadii ku shirsanaa Baydhabo oo War-saxaafadeed soo saaray
Next articleLaamaha Amniga oo Muqdisho ku qabtay Koox Burcad ah